Aye Thida,aBurmese journalist in prison | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Beyond the Boundary art group show in Chiang Mai
hip hop star to politician? →
အင်တာနက်ဂျာနယ်၊ 7Day News ဂျာနယ် တို့မှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ မအေးသီတာဟာ ဒဂုံတက္ကသိုလ်က ဘောဂဗေဒဘွဲ့ ရထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးဇော်ဝင်းလို့ လူသိများတဲ့ ပန်းချီဆရာ ဦးဇော်ဝင်းရဲ့ သမီးပါ။၂၀၀၅ ခုနှစ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ လွပ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု တို့ကို လိုလားသူတဦး အနေနဲ့ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဟင်္သာတ အကျဉ်းထောင်ထဲက မအေးသီတာ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပြီး မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဆုံစည်းနိုင်ပါစေ။
Posted by oothandar on May 21, 2011 in Political Prisoners